Umehluko phakathi kokushintsha kwesimo sezulu nokufudumala komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Zivame ukusetshenziselwa amagama afanayo ngendlela engafanele, amagama athi ukuguquka kwesimo sezulu kanye nokufudumala komhlaba lapho kusho khona izinto ezimbili ezihluke ngokuphelele. Kuyacaca ukuthi lemiqondo emibili ibhekisa ekuhluphekeni okukuyo yonke iplanethi ngenxa yesandla somuntu nalabo okumele ukulungisa ngokushesha.
Ngizochaza ngokucacile ngezansi igama ngalinye liqukethe ini ukuze kucace kini.
Lapho ochwepheshe besebenzisa igama elithi ukuguquka kwesimo sezulu, bhekisa kuzinguquko ezinqala kwesimo sezulu ezithinta izici ezinjengamazinga okushisa, imvula noma umoya nokwenzeka amashumi eminyaka ambalwa. Ngokuphambene, ukushisa kakhulu komhlaba Kusho ukukhula okuqhubekayo kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba.
Lokhu kufudumala kubangelwa ukugxila kwe- amagesi abamba ukushisa lokho kusesibhakabhakeni futhi kukodwa nje akukho okungaphezu kwalokho isici esibizwa ngokuguquka kwesimo sezulu.
Akungabazeki ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuyinkinga yangempela yangempela nokuthi iplanethi yonke iyafudumala ngokuqhuma. Ngokusho kweminye imininingwane ethembekile, izinga lokushisa elijwayelekile leplanethi selikhuphukile ngaphezu kuka-7 degrees kulo lonke ikhulu leminyaka elidlule. Ososayensi babikezela ukuthi izinga lokushisa elijwayelekile lizokhuphuka ngo- Ama-1.1 degrees ukuya kuma-6.4 degrees kulo lonke ikhulu lama-XNUMX, le yimininingwane ekhathazayo ngempela ezobangela izinguquko eziyingozi kakhulu esimweni sezulu.
Le miphumela emibi yokuguquka kwesimo sezulu yenzeka nsuku zonke nangaphakathi noma iyiphi indawo yeplanethi. Ezindaweni eziningi imvula iye yanda futhi yabangela izikhukhula, kuyilapho kwezinye izindawo zomhlaba, kuye kwaba khona isomiso esibi . Amagagasi okushisa phakathi nezinyanga zasehlobo kaningi, kubangele inani elikhulu lokufa kanye nenani elikhulu lomlilo wehlathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Umehluko phakathi kokushintsha kwesimo sezulu kanye nokufudumala komhlaba
La Cala (@calamtz) kusho
Sawubona, inothi elihle, ngicabanga nje ukuthi wenza iphutha lapho uthi izinga lokushisa lenyuke ngama-degree ayi-7 ekhulwini leminyaka elidlule, into eyiyo kungaba ngu-0.7, ngikushiya lesi sixhumanisi esingaba wusizo.
Phendula ku-La Cala (@calamtz)